‘Lehilahy niverina tao Xinjiang toerana nahaterahany ary tsy hita ’ — Tantara iray mahazatra fanao lohateny lehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2019 8:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Ελληνικά, English
Tsy hita nanomboka tamin'ny volana martsa 2018 i Nurbolat Shalayit. Dikasary avy tamin'ny lahatsary fijoroana vavolombelona voarakitra ao amin'ny biraon'ny Ata Jurt any Almaty, Kazakstàna ary navoaka tao amin'ny fantsona YouTube-n'ny vondrona tamin'ny 11 novambra 2018.
Fanamarihana: Ny 20 Febroary dia nilaza tamin'ny Global Voices i Sayagul Nurbolat hoe niverina nody tao Kazakhstan ny rainy tamin'ny 19 Febroary, izay andro namoahana ity lahatsoratra ity tamin'ny teny Anglisy
Mety ho toerana hiroborobo handaniana ny maraina tontolo ny biraon'ny Ata Jurt any Almaty, vondrona iray any Kazakstàna izay manohana ireo niharam-boina noho ny afitsoky ny mpitandro filaminam-panjakana shinoa any Xinjiang.
Rakotry ny sarin'ireo olona tsy hita ireo rindrina ao amin'ny efitrano lehibe. Eo no anaovan'ny mpanome vaovao ny antsafa ho an'ireo mpanao gazety, fanehoana amin'ny vahoaka ny tranga vaovao momba ireo olona tsy hita na voatàna efa ela any Xinjiang, toerana malaza amin'izao fotoana izao fa misy ilay “toby fanarenana” an'ny governemanta Shinoa.
Rehefa fotoana toy izao, dia manjary tsy azo ifamezivezena ilay lalàntsara tery ao amin'ilay birao noho ny hamaroan'ireo olona mpitaky izay mifampizara ny tantaran'ny fahaverezana goavana sy ny fihenan'ny fanantenana.
Ireo olona rehetra ireo — olom-pirenena avy any Kazakstàna ny sasany, ny hafa kosa olom-pirenena kazakstàna mizaka ny zom-pirenena shinoa eo am-panarahana ny taratasiny — dia manao izay “handrenesana ny feony” momba ny tsy fahitàna ireo havany.
Amin-dry zareo, ny atao hoe mpanao gazety dia fanamafisam-peo mandehandeha, fomba iray hanerena an'i Shina mba hanafaka ireo olo-malalany, na avy amin'ny “fanarenana indray” ara-politika izany, na avy amin'ny fanibohana an-trano, na ny asa an-terivozona, na fanjakana tsy misy pasipaoro tsotra izao izay mahazo ny ankamaroan'ireo vitsy an'isa any Xinjiang amin'izao fotoana izao.
Fantatry ry zareo fa tsy manome antoka na amin'ny inona na amin'ny inona io fomba fiasa io no sady tsy hanamaivana ny fijalian'ireo havany tsy hita. Nefa fantatr'izy ireo ihany koa fa nahita hazavana ery amin'ny faran'ny tonelina ireo fianakaviana vitsivitsy nanentana am-pahibemaso ho an'ireo hava-malalany. Navotsotra ireo havany sady navelan'ny manam-pahefana shinoa hamonjy ny fianakaviany any Kazakstàna. Ny fahanginana no hany paikady azo antoka fa tsy mahomby.
Inona no nanjo an'i Nurbolat Shalayit?
Tamin'ny fitsidihana farany nataoko tao amin'ny biraon'ny Ata Jurt, nihaona tamin'ny vadin'i Nurbolat Shalayit, ilay lehilahy tsy hita tany Xinjiang efa ho herintaona izao, aho . Izy dia isan'ireo vehivavy maro izay nanantena fa ny antsafa natao ho an'ny mpanao gazety tamin'io andro io dia mety hanome sehatra ho azy ireo mba hilazàny ny tantarany amin'ireo mpanao gazety liana te-hanoratra tantara.
Samy teratany kazàka teraka tany Xinjiang i Nurbolat sy i Kulpash Kadyrbek vadiny. Samy nipetraka tany izy mivady hatramin'ny taona 2014, fotoana izay nifindran'i Kuplash ho any Kazakstàna niaraka tamin'ny zanany vavimatoa, Sayagul. Tany Almaty, tanàna lehibe any Kazakstàna, no nipetrahan'izy mianaka, toerana nisy havan-dry zareo.
Mba hikarakara ny reniny efa antitra, Nurbolat Shalayit kosa nijanona niaraka tamin'ny zanany faravavy, i Sandugash Nurbolat — izay nanaparitaka ny tsy fahitàna azy amin'ilay lahatsary ery ambony. Tamin'ny desambra 2016, volana vitsy taorian'ny nahafatesan-dreniny, nifindra tany Kazakstàna ry zareo ary nanomboka niara-nipetraka toy ny fianakaviana indray.
Ny Febroary 2017, niala tany amin'ny tranony vaovao tany Kazakstàna ho any Xinjiang i Nurbolat mba hamarana ny fivarotana ilay tranony taloha. I
Dimy volana izay, lasa solontena matanjaka indrindran'ny antoko Kaominista tany Xinjiang i Chen Quanguo, tanatinà fivoriana iray izay mety ho nitondra ho amin'ny fahaterahan'ny andiany antsoina hoe ” toby fanarenana (fanabeazana indray)” nanerana ny faritra.
Latsaka anaty famoizam-po
Tena fotoana ratsy ho an'ny olona toa an'i Nurbolat Shalayit ny handoa izay noheveriny fa famangiana fohy an'i Xinjiang mba hamaranana ny olana.
Nandritra izany taona izany, lasa ampianarina manokana ny politikan'ny “fanarenana” ireo vitsy an'isa. Ny faran'ny taona 2017 ireo gazety tandrefana.vao nanomboka nitatitra ny hamafin'ny fijaliana any amin'ilay faritra
Tamin'ny volana aogositra 2018, novinavinain'ny vondron'ireo manampahaizana manokan'ny Firenena Mikambana fa iray tapitrisa ireo vitsy an'isa izay Siklamo ny ankamaroany — Oigoro fa Kazàka, Kirgiza, Hui — napetraka any an-toby fihazonana any Xinjiang.
Isan'ireny ve i Nurbolat Shalayit ? Tsy mahalala ny fianakaviany.
Tamin'ny Martsa 2018 no nifandraisan-dry zareo farany taminy, rehefa niteny tamin'ny vadiny izy mba “hikarakara ireo zanany.” Nanomboka teo dia tsy azo intsony izy.
Henjana be ny fiantraikany ara-pihatseham-po sy ara-bola ny tsy naha-teo azy.
Tsy manam-bola handoavana hofan-trano maharitra any Almaty, mipetraka amin-kavana i Kulpash Kadyrbek. Mianatra any amin'ny oniversite miteny anglisy any Polonina i Sayagul, saingy manjavona tsikelikely isanandro miaraka amin'ny vola azo amin'ny fivarotana ny vokatra azo avy amin'ny toeram-piompian'ny fianakaviana any Xinjiang io fahafahana io.
Ny fahaizan'i Sayagul teny anglisy no antony anoratako ity lahatsoratra ity. Miteny rosiana ny ankamaroan'ny Kazàka mipetraka any Kazakstàna, toa ahy ihany. Ho an'ireo maro any Almaty, io no fiteny ankafiziny, fiteny voaray tamin'ny fampidirana ny teny rosiana tamin'ny andron'ny Firaisana Sovietika.
Fa ireo kazàka Oralman (“niverina”) avy any Shina, izay nameno ny biraon'ny Ata Jurt, dia manao ny teny kazàka ho fiteny voalohany, matetika ny fiteny Shinoa sy Oigoro no fiteny faharoa. Rehefa tonga avy amin'ny fiaramanidina ny BBC sy ny CNN, dia afaka manome ny saran'ny asa fandikany ireo mpandika teny mahay.
Tamin'io andro io, isan'ireo nandray anjara tamin'ilay antsafa ho an'ny mpanao gazety ny vehivavy iray afaka avy any Shina rehefa nandany herintaona sy tapany tamin'ny fanarenana sy ny mpitandro filaminana taloha iray izay nandositra an'i Shina, ohatra ny manana fahalalàna lalina kokoa momba ny fomban'i Xinjiang rehefa manara-maso izy ireo.
Ireo tranga roa ireo dia ampy hampivarahontsana mba hanasongadinana ireo tombontsoan'ny haino aman-jery vahiny mpampahalala vaovao izay mikatsaka làlam-baovao handrakofana misimisy kokoa ny krizy miha-henjana ao Xinjiang.
‘Etsy andanin'izany , ilay tantaran'i Nurbolat Shalayit dia azo averina matetika miaraka amin'ny fiovana madinidinika arakaraky ny tranga misy
Raha nangataka ny mba handrenesana ny fijoroany vavolombelona talohan'ny nanombohan'ilay hetsika lehibe ireo mpitaky sasany, dia nanome finday ahy i Kulpash Kadyrbek. Ny zanany vavy , Saygul, no niantso, niresaka tamin'ny antso an-tsary tamin'ny fiteny azoko.
Izany no tantaran'ny fianakaviany. Misy hafa an'arivony tahaka izany any.
Ny Angon-drakitra Xinjiang misy ireo Niharamboina no angon-drakitra midadasika indrindra amin'ny teny anglisy be mpitady mifandraika amin'ireo niharan'ny famoretana misy amin'izao fotoana izao any XUAR .
5 andro izayAzerbaijan
1 herinandro izayZeorzia
2 herinandro izayAzerbaijan
Nanao fihetsiketsehana manoloana ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana sy ny Harena Voajanahary ao Azerbaijan ireo mpiaro ny tontolo iainana